Inkcazo ye-Ekaristi ebuKristwini
Funda i-Eucharist in Christianity
Funda Okunye Ngomlinganiso Ongcwele okanye iSidlo seNkosi
I-Ekaristi enye igama loButhixo obungcwele okanye iSidlo seNkosi. Eli gama livela kwiGrike ngesiLatini. Lithetha "ukubonga." Ngokuqhelekileyo kubhekisela ekungcwalisweni komzimba kunye negazi likaKristu okanye ukubonakaliswa kwayo ngesonka kunye newayini.
KwiKatolika yamaRoma, eli gama lisetyenziswe ngeendlela ezintathu: okokuqala, ukubhekisela ekukholeni kukaKristu; Okwesibini, ukubhekisela kwisenzo sikaKristu esiqhubekayo njengoMbingeleli Omkhulu ("Wabonga" kwiSidlo Sokugqibela , esaqala ukuhlanjululwa kwesonka newayini); kunye nesithathu, ukubhekisela kwiSigramente yeSidlo soMoya.
Ngokutsho kweTestamente Entsha, i-Eucharist yasungulwa nguYesu Kristu ngexesha lakhe lokuhlwa. Kwiintsuku ngaphambi kokubethelwa kwakhe wabelana ngesidlo sokugqibela sesonka kunye newayini kunye nabafundi ngexesha lesidlo sePasika. UYesu wayalela abalandeli bakhe ukuba isonka "sasingumzimba wam" kwaye iwayini "yayiyigazi lakhe." Wayalela abalandeli bakhe ukuba badle oku kwaye "benze oku kukukhumbula kwam."
Wathabatha isonka, wabonga, wasiqhekeza, wabanika yona, wathi, Lo ngumzimba wam, onikwe wona, yenza oku kukukhunjulwa. "- Luka 22:19, Christian Standard Bible
Ubukhulu Akunjalo ngo-Eucharist
Inkonzo yecawa ngeCawa nayo ibizwa ngokuthi "iMisa" ibhiyozelwa ngamaRoma Katolika, iiAnglican, namaLuthere. Abantu abaninzi babhekisela kwiMisa ngokuthi "i-Eucharist," kodwa ukwenza oko akulungilekanga, nangona kusondela. I-Mass iyakhiwa ngamacandelo amabini: iLiturgy yeLizwi kunye neLiturgy ye-Ekaristi.
Ubukhulu bungaphezu nje kweSigramente yeSidlo esingcwele. KwiSigramente yeSidlo soBungcwele, umbingeleli unqamisela isonka kunye newayini, eyaba yi-Ekaristi.
AmaKristu ahluke kwiSigama esetyenziswayo
Ezinye iicawa zikhetha isigama esithile ngokubhekiselele kwizinto ezithile eziphathelele ukholo lwabo.
Ngokomzekelo, igama elithi Eucharist lisetyenziswe ngokubanzi ngamaRoma Katolika, iOthodoki yaseMpuma, iOthodox yaseMpuma, iiAnglican, iiPresbyterian kunye namaLuthere.
Amanye amaProtestanti kunye namaqela angamaVangeli akhetha isigama sokudibana, iSidlo seNkosi, okanye ukuPhula kweSonka. Amaqela angamaVangeli, njengamabandla aseBhaptizi nePentekosti, ngokubanzi agwema igama elithi "Ukutya" kunye nokukhetha "iSidlo seNkosi."
Ingxabano yamaKristu kwi-Eucharist
Azikho onke amahlelo avumelana nantoni na eyenziwa ngu-Eucharist. AmaKristu amaninzi avuma ukuba kukho ukubaluleka okukhethekileyo kwe-Ekaristi kunye nokuba uKristu abekhona ngexesha lokoqobo. Nangona kunjalo, kukho ukungafani kwimbono malunga nokuba, kuphi na nini na uKristu.
AmaRoma Katolika akholelwa ukuba umbingeleli unqamisela iwayini nesonka kwaye uyaguquka aze atshintshe emzimbeni nasegazini likaKristu. Le nkqubo iyaziwa nangokuthi i-transubstantiation.
AmaLuthere akholelwa ukuba umzimba owenene kunye negazi likaKristu ziyingxenye yesonka newayini, eyaziwa ngokuba yi "union union sacramental" okanye "i-consubstantiation". Ngelo xesha likaMartin Luther, amaKatolika athi le nkolelo yinto ephilileyo.
Imfundiso yamaLuthela yomanyano we-sacramental ikwahluke kwindlela yokujonga kwakhona.
Umbono kaCalvin malunga nobukho bukaKristu kwisidlo seNkosi (ubukho bokwenene, ngokomoya) kukuba uKristu ukhona ngokwenene kwisidlo, nangona kungenakunzulu kwaye engabandakanyi ngokukhethekileyo isonka kunye newayini.
Abanye, njengabazalwana basePlymouth, bathathe isenzo nje kuphela ukubonakalisa ukufanekisa kwesiSidlo sokugqibela. Amanye amaqela amaProtestanti agubha iMidlobano njengento yokufuzisela umnikelo kaKristu.
Kuthetha ukuthini "Ukunikezela"?
Izipho ezisixhenxe zoMoya oyiNgcwele
Yintoni Eyona Ngxaki Yomzimba?
Sisiphi isiseko seBhayibhile sePurgatory?
Yintoni i-Sacramental Grace?
Yintoni uMbutho wePurgator?
I-Admissions yeKholeji yaseRoberts Wesleyan
Yiyiphi iBhanki esebenzayo?
Iintlanganiso zeMoya - Iindaba eziNyaniso - Icandelo 2
Ukuxhomekeka kwiMbali yeBafazi kunye neZifundo zoLuntu
Kuphi Ukuthenga Amagalelo kunye neeTires kwi-Intanethi
Ngo-1955 - I-Kelly, iKentucky, i-Alien Invasion
Iintsingiselo kunye nabalingiswa kwiLizwi laseJapane elithi "Kao"
USara Gruen Umbhali wamanzi weNdlovu Intetho
UTamarisk - isiThili esiNxweme
Iindlela ezili-10 zokuqinisekisa ukuba ube nguMtshakazi
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -ase
I-1773 iBoston Tea Party kunye noBugcisa base-US
IJedi Master: Ziziphi iiNqanaba zokuThengisa abaFundi abaFundi
Kuquka iiFayile zangaphandle kwi-PHP
Ezi ndawo zokuKhatyelwa kweeMidlalo eziPhephayo ziyakwazi ukukhupha abantwana bakho kubomi